सावधान! नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ भने, हुन सक्छ उच्च रक्तचापको संकेत - ज्ञानविज्ञान
उच्च रक्तचापको कारण धमनीमा रगतको दबाब बढ्न जान्छ । दबाब यसरी बढ्दै गएका कारण धमनीमा रक्तप्रवाह सुचारु हुनका लागि मुटुले अधिक मात्रामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः पुरुषले यस समस्याको वास्ता नराखेको पनि पाइन्छ ।
उच्च रक्तचाप आधुनिक जीवनशैलीमा ४० वर्षको उमेरआसपासमा हुन्छ । हिजोआज यो आम स्वास्थ्य समस्या बन्न पुगेको छ । सामान्य अवस्थामा स्वस्थ व्यक्तिको उच्च रक्तचाप १२० तथा न्यूनतम ८० हुन्छ । स्वस्थ व्यक्तिका लागि रक्तचाप सामान्य रहन बहुत जरुरी छ । दुनियाँभर धेरै संख्यामा उच्च रक्तचापको समस्याबाट ग्रसित बिरामी छन् ।
उच्च रक्तचापको प्रारम्भिक लक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको शिरको पछाडि अथवा गर्दन दुख्छ ।
यदि अधिक मात्रामा तनावमा रहेको महसुस गर्नुहुन्छ भने यो उच्च रक्तचापको संकेत हुन सक्छ । स–साना कुराले पनि रिस उठ्छ
कहिलेकाहीँ आफूले गरेका निर्णय सही हुन् या गलत भन्ने यकिनसमेत गर्न सक्दैनन् ।
उच्च रक्तचापका कारण रिंगटा लाग्ने हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ शरीरमा भएको कमजोरीका कारण पनि रिंगटा लाग्न सक्छ । यस्तो समस्या देखियो भने चिकित्सकसँग परामर्श लिन जरुरी छ ।
यदि तपाईं सामान्य काम गर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ । घरको सिँढी चढ्दा पनि निकै थकान महसुस हुन सक्छ । यस्तो हुन्छ भने उच्च रक्तचापले ग्रस्त बनाएको हुन सक्छ ।
सास फेर्न गाह्रो हुने, लामो सास आउनेजस्ता समस्या देखियो भने तुरुन्त चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस् । यो उच्च रक्तचापले ग्रस्त भएको संकेत पनि हो । यति मात्रै होइन, नामबाट खुन आउने पनि हुन सक्छ ।
उच्च रक्तचापका रोगीलाई रातमा निद्रा लाग्न हम्मेहम्मे पर्छ ।
तपाईंको मुटुको धड्कन पहिलेभन्दा बढ्दै गएको हुन सक्छ । मुटु दुख्न सक्छ ।
कहिलेकाहीँ कतिपय पुरुषमा उच्च रक्तचापसम्बन्धी केही लक्षण नदेखिन पनि सक्छ । यी कुरा चेकअपपछि मात्रै जानकारी हुन्छ । उच्च रक्तचापका कुनै पनि लक्षण देखिँदैन भने किड्नी अथवा मुटुका लागि घातक हुन सक्छ ।
Topics #उच्च रक्तचाप #गर्दन #थकान #धड्कन
Don't Miss it स्ट्रेस हुँदा अपनाउनुस यस्ता उपयोगी उपायहरु
Up Next गोरो हुन मन छ ? यस्ता छन् गोरो हुने घरेलु उपाय
सुत्नेबेलामा यी खानेकुरा नखानुहोस्
हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा खानाको निकै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जुन खानेकुरा सिधै हाम्रो स्वास्थमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । हामीले कुन…
कसरी मिठो निद्रा लिने ?
अनुसन्धानहरुले विश्वव्यापी रुपमै समेत मान्छे कम निदाउने वा निदाउन नसक्ने समेत प्रष्ट पारेका छन्। विभिन्न कारणले मानिसको निद्रा विथोलिएको अनुसन्धानहरुले पछिल्लो समयमा देखाएका छन् । आफ्नै र…
यी रोगहरु भगाउनुहोस् ताली बजाएर
तालि बजाउनाले रगतको प्रवाहलाई सुचारू गर्न मद्दत गर्छ । तर, खाना खाएको एक घण्टापछि ताली बजाउनुपर्छ । हामी सामान्यतः खुशी…
घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस
सुकुमेल तीनचारवटा सुकुमेल र एक चम्चा सुपलाई राम्रोसँग पिस्ने र एक ग्लास दूधसँग दिनहँु पिउने । अमला अमला पकाएर तयार…
एस्ता छन्, निम्न रक्तचाप (Low Blood Pressure)का कारण, लक्षण र घरेलु उपचार
उच्च रक्तचाप जस्तै धेरै कम रक्तचाप पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । कम रक्तचापका कारण मस्तिष्क र किड्नी दुवैमा नोक्सानी…
कुन ब्लड ग्रुप भएका मानिसको आनीबानी र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? जानिराखाैँ
एक अनुशन्धान अनुसार मानिसहरुको रगत समुह अनुसार उसको चालचलनको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ र रगत समुह फरक भएमा मानिसको विचार…